नेकपाका तीन शक्तिशाली नेता ओलीपक्षमा, प्रचण्ड एक्लिए ! – विराट अनलाइन खवर
नेकपाका तीन शक्तिशाली नेता ओलीपक्षमा, प्रचण्ड एक्लिए !
काठमाडौं। विभाजित नेकपाका तीन शक्तिशाली नेताहरु ओलीपक्षमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा राजीनामा दिनेहरु समेत अहिले ओलीपक्षमै फर्किएपछि प्रचण्डपक्षलाई तनाब बढेको छ।
प्रदेश १ का तीन सांसद जसमाया गजमेर, गोपाल बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनाली ओलीपक्षमा गएका हुन्। गजमेर प्रदेश १ की सामाजिक विकास राज्यमन्त्री पनि गजमेरले पुस १२ गते पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । यतिमात्रै हैन्, सोही दिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर समेत गरेकी थिइन्।
राजीनामाअघि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ओली समूहले बनाएको केन्द्रीय सदस्यमा नबस्ने बताएकी थिइन् । तर राजीनामा दिएको २२ दिनपछि उनी पुनः ओली समूहमा फर्किएकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला झापाबाट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीनजनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएका हुन्।
प्रदेशमा पक्षगत सांसदको संख्याले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेहुँदा अहिले सांसदहरु शक्तिशाली ठहरिएका छन् । यसरी निरन्तररुपमा ओलीपक्षमा नेताहरु थपिँदै गर्दा प्रचण्डलाई आफु एक्लिने डर बढ्न थालेको देखिन्छ।
Tags: नेकपाका तीन शक्तिशाली नेता ओलीपक्षमा प्रचण्ड एक्लिए !
Previous भारतले बुधबारदेखि नेपालसहित छिमेकी मुलुकलाई अनुदानमा खोप दिने
Next इजलासमा संबिधान निर्माणको रेकर्ड मागिएपछि प्रधानन्यायाधिश राणाले उठेरै दिए यस्तो जवाफ